Raha mampiasa vokatra bongs ianao dia hanana tsiro tsara eo amin'ny fiainana.Voalaza fa marary andoha be ny fifohana sigara ho an’ny olona maro, ary mbola hanakantsakana azy ireo ny fianakaviany.Na dia fantany aza fa manimba ny fahasalamana ny fifohana sigara, dia tsy mahafehy tena izy ireo.Taorian'ny sigara rongony ...
Fantatrao ve ny vokatra vita amin'ny rig bong? Heverinao ve fa hitondra fahavoazana ho an'ny vatantsika ny fampiasana an'io vokatra io?Mino aho fa maro ny olona mahazo an'io fomba io.Amin'ny manaraka dia hanazava ny fahalalana sasany momba izany amin'ny antsipiriany isika.Manantena ny hanatsara ny fahatakaran'ny rehetra momba ity pro...
Bubbler Bong: Ahoana ny fampiasanao azy ireo?
Bubbler Bong: Ahoana ny fampiasanao azy ireo?Fomba iray hafa tsy mampino hankafizana rongony… Be dia be ny fomba fihinanana rongony ankehitriny.Azonao atao ny manodina fitambarana mahazatra, mandrehitra spliff, mametaka bong, mampiasa chillum na ...
Ahoana no fiasan'i Bongs?
Ahoana no fiasan'i Bongs?Ny bong dia fantsona rano ampiasaina betsaka amin'ny fihinanana rongony.Milaza ireo mpanohana ny fitaovana fa manome kapoka malefaka kokoa izy io ary mamela ny hamamoana ambony kokoa.Nomarihan'ny mpanohitra fa tsy tsara ho an'ny havokavoka ny bong noho ny smo hafa...
Ho an'i bong, inona no tokony ho fantatrao…
Bongs dia iray amin'ireo endrika mahazatra indrindra amin'ny fihinanana rongony, indrindra ny voninkazo maina.Antsoina koa hoe fantsona rano, indraindray antsoina hoe billy, bing, binger ary teny slang hafa, ny bong dia tena latsa-paka ao amin'ny kolontsaina cannabis ka maro amin'ireo mpankafy no nanonona ny sanganasany, mamadika zavatra tsy misy aina tany am-boalohany ...
Zavatra Voalohany Voalohany: Karazana Bong
Amin'ny farany dia misy fiantraikany amin'ny fahafahany misintona setroka mankany amin'ny efitranon'ny rano sy ao anaty fantsona ny endrika, ny habeny ary ny haavon'ny bong vera.Ankoatra izany, ny savaivony ny vilia baolina sy ny tahony ihany koa no mibaiko ny fikorianan'ny setroka sy ny rivotra.Ny karazana bong fitaratra malaza dia ahitana: Percolator Bong: A percolator bong u...
3 Zavatra tokony hodinihina rehefa mifidy Glass Bong
1- Jereo raha misy lesoka!Tsidiho foana ny vera sao misy lesoka sy vaky volo.Tandremo manokana ny faritra akaikin'ny spiral sy ny tonon-taolana.Ary koa, aza mandeha ho azy amin'ny bong lehibe indrindra hitanao.Afaka mahita bongs lehibe ianao amin'ny vidiny mora, fa hanana session mediocre ianao raha acrylic...
Ahoana no fanaovana bongs vera?
Ny bong fitaratra dia singa mifoka sigara mahomby sy tsara tarehy, izay vita amin'ny teknika fototra amin'ny fitsofana fitaratra. Matetika ny bong fitaratra dia misy loko marevaka, endrika saro-takarina, ary haingon-trano be pitsiny.Torak'izany koa, bong fitaratra maro no tonga miaraka amin'ny singa fanampiny toy ny mpihaza ranomandry sy ny percolator...